သင်၏ဖုန်း မှစ. ဖက်စ်ရန်ကဘယ်လို
နယူး & Next ကို နောက်ဆုံးပေါ်
သင်သည်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းဖက်စ်မှသုံးနိုငျခြောက်လဖက်စ် apps များ, ဘယ်နေရာမှာမဆို
yeah, faxing ။ အဖြစ်ခက်ကယုံကြည်ဖို့ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံနေဆဲလိုအပ်သောပါပဲ။ ကံကောင်းတာကအချို့လိမ္မာပါးနပ် software နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ trusty စမတ်ဖုန်းနှင့်အတူကျနော်တို့နေဆဲကဖြစ်ပျက်စေနိုင်သည်။
ဤတွင်ကို Android နှင့် iOS device များအတွက်အကောင်းဆုံးအဘယ်အရာကိုပါပဲ။
iOS အတွက်ထံမှ screenshot
အဆိုပါလူသိအများဆုံးအင်တာနက်ဖက်စ်န်ဆောင်မှုတစ်ခုမှာအဖြစ် eFax ၏မိုဘိုင်းရာပူဇော်သက္ကာကိုဖက်စ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ် PDF ဖိုင်ရယူရန်ဖိုင်များကို သင့်ရဲ့ device ကိုမှတိုက်ရိုက်လွယ်ကူ access ကိုအဘို့သင့်အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ထံမှ faxing ဘို့စာရွက်စာတမ်းများပူးတွဲနိုင်ပါတယ် Dropbox , OneDrive , iCloud နှင့်အခြား Server-side သိုလှောင်မှု repositories ကများနှင့်မှတ်စုများနဲ့တောင်မှသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် add ဖို့ option ကိုထောက်ပံ့ပေးနေကြသည် အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ် ကြိုတင်တင်ပြရန်။ eFax သင်တို့ကိုလည်း app ကိုအတွင်းကနေကြည့်ရှုနိုင်သည်နေသောသင့်ရဲ့တာဝန်ပေးအရေအတွက်ကိုမှာဖက်စ်များ, လက်ခံရရှိရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
တစ်ဦးကအခမဲ့ 30-နေ့ကရုံးတင်စစ်ဆေးသင်ရွေးချယ်မည့်အစီအစဉ်အပေါ်မှီခိုပမာဏနှင့်အတူလစဉ်ငွေကောက်ခံပါလိမ့်မယ်အရာပြီးနောက် app နဲ့ eFax ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများ, အမြည်းပေးနိုင်ပါတယ်ရာရရှိနိုင်ပါသည်။ $ 16,95 / လ၏ပြားချပ်ချပ်အခကြေးငွေအဘို့, eFax Plus အားသငျသညျအသီးအသီးစာမျက်နှာတစ်ဆယ်ဆင့်တရားစွဲဆိုနေတဲ့အရာပြီးနောက်, သငျသညျ 150 စာမျက်နှာများကိုပေးပို့လက်ခံခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်ပိုမိုမကြာခဏဖက်စ်ဖို့စီစဉ်နေလျှင်, eFax Pro ကိုအစီအစဉ်အစားသို့ကြည့်မျှော်ရကျိုးနပ်ပေမည်။
iOS အတွက် (iPad, iPhone, iPod touch)
FaxFile အမေရိကန်, ကနေဒါနှင့်အချို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာများတွင်ဖက်စ်စက်ရန်သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုမှတိုက်ရိုက်ဖိုင်များကိုသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများပေးပို့နိုင်စွမ်းပေးပါသည်။ သင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုသူတို့ကသင့်လျော်သောပုံစံသို့ကူးပြောင်းကာခဲယဉ်း, စက္ကူဖက်စ်အဖြစ်သင့် destination သို့စလှေတျတျောရှိရာ FaxFile ရဲ့ဆာဗာများ, ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။
ဒီ app ကို PDF နဲ့နှစ်ဦးစလုံးကို support နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာရွက်စာတမ်းများ နှင့်အတူ PNG နဲ့ JPG ထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့ကင်မရာကိုယူသောသူတို့အဖြစ်ပုံများ, ။ အဘယ်သူမျှမအကောင့်သို့မဟုတ်ကြေးပေးသွင်းစျေးနှုန်းများသင်တစ်ဦးပြည်တွင်းတည်နေရာပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာတွင်ရှိမရှိအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားအတူ FaxFile မှတဆင့်မက်ဆေ့ခ်ျများထုတ်လွှင့်ဖို့လိုအပ်ပါသည်သျောလညျးသငျခရက်ဒစ်ဝယ်ယူရန်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး။ သင်က app ရဲ့လက်ရှိဗားရှင်းနဲ့, သို့သော်, ဖက်စ်များမခံမယူနိုငျသညျ။
သင်သည်တစုံတခုကိုမှမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်စာရင်းပေးသွင်းခြင်းမရှိဘဲဖက်စ်ပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုနောက်ထပ် app ကို PC-FAX.com FreeFax သင်သည်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများ၏ဓာတ်ပုံကိုယူနှင့်သင့်ဖုန်းမှတိုက်ရိုက်ဖက်စ်ပေးနိုင်ပါတယ်; အဖြစ်ကောင်းစွာအချို့အီးမေးလ်ပူးတွဲထုတ်လွှင့်ရန်စွမ်းရည်နှင့်အတူ။ သငျသညျကိုလညျး app ထဲမှာစာသားကိုရိုက်ထည့်နှင့်သင့်ဖက်စ်သတင်းစကားအဖြစ်ပေးပို့, ဒါမှမဟုတ် Dropbox နှင့်ထံမှစာရွက်စာတမ်းများထုတ်လွှင့်လို့ရပါတယ် Google Drive ကို ။
FreeFax သငျသညျကိုအမေရိကန်, ကနေဒါ, သြစတြေးလျ, တရုတ်, ရုရှား, ဂျပန်နှင့်အတော်ကြာဥရောပခရီးစဉ်အပါအဝင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်အခမဲ့တစ်နေ့လျှင်တစ်ဦးစာမကျြနှာကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ပိုပြီးပေးပို့ဖို့, အဘယ်သူ၏ကုန်ကျစရိတ်ဇုန်များနှင့်စာမကျြနှာအရေအတွက်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြား In-app ကိုဝယ်ယူမှုရှိပါသည်။ သင်တို့သည်လည်း FreeFax နှင့်အတူဖက်စ်များရရှိနိုငျသျောလညျးသငျဟာ host number ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးဝယ်ယူရန်သာလျှင်။
ဒီ app သင်တစ်ဦးအခကြေးငွေများအတွက်ရိုးရာခရုမေးလ်ကနေတဆင့်စစ်မှန်တဲ့အက္ခရာများကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြု, faxing ကနေဘေးဖယ်ကာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
Genius ဖက်စ်သငျသညျ 40 ကျော် destination သည်နိုင်ငံများအတွက်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူတစ်ဖက်စ်စက်မှပုံရိပ်များနှင့် PDF files တွေကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုသောအခြား App ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးဖက်စ် app ထဲတွင်မျှော်လင့်ထားသည့်အင်္ဂါရပ်များအပြင်, ဒါ့အပြင် Real-time ပေးပို့မှုအတည်ပြုချက်နဲ့တစ်လလျှင် $ 3.99 မှာဖက်စ်မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်တစ်ခုဝယ်ယူရန်နိုင်စွမ်း (ကစာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာ) ပေးသည်။
၎င်း၏စျေးနှုန်းဖွဲ့စည်းပုံမှာတဦးတည်းကရက်ဒစ်တဦးတည်းစာမျက်နှာညီမျှဘယ်မှာခရက်ဒစ်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ သီးခြားစီဝယ်ယူသည့်အခါဤအခရက်ဒစ် $ 0.99 ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, (50 ခရက်ဒစ်အဘို့အဆိုလိုသည်မှာ $ 19.99) အမြောက်အများအတွက်ဝယ်ယူသည့်အခါသိသိသာသာဈေးလျှော့ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီ feature-ကြွယ်ဝသော app ကိုတစ်ဦး account ဖန်တီးပြီးသို့မဟုတ်ဘာမှမတက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းမရှိဘဲလျင်မြန်စွာဖက်စ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်တစ်ခုအလိုလိုသိ, လွယ်ကူသော-to-လမ်းကြောင်းရှာရန် interface ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ iFax PDF ကိုပူးတွဲမှုများဖက်စ်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းအဖြစ်ကို support ကို DOC , XLS , JPG နှင့်ပိုပြီး။ သင့်ရဲ့ cloud-based ဖိုင်များမှဖက်စ်များထုတ်လွှင့်ဖို့ Dropbox, Google Drive ကိုနှင့် Box ကိုအတူပေါင်းစည်း, app အားသင်၏လိုဂို်စိတ်ကြိုက်အဖုံးစာမကျြနှာအဘို့ခွင့်ပြု, လက်မှတ်, etc
အဆိုပါစကင်နာအင်္ဂါရပ်စာရွက်စာတမ်းများဓါတ်ပုံများဖြတ်တောက်နှင့် HIPAA-compliant နည်းပညာကို အသုံးပြု. လုံခြုံဂီယာကနေတစ်ဆင့်ပေးပို့ခြင်းမပြုမီအရောင်အဝါနှင့်အပြတ်သားကိုထိန်းညှိဖို့စွမ်းရည်ပေးပါသည်။ iFax ဖက်စ်နှုန်းသို့မဟုတ်သင်မကြာခဏအသုံးပြုပေါ်စီစဉ်နေလျှင်အချို့သောပိုက်ဆံကယ်တင်နိုင်သည့်အကြွေး packages များမှတစ်ဆင့်ပေးဆောင်ဖို့ option ကိုပေးပါသည်။ ထိုအရပ်၌များစွာသောဝယ်ယူ options များရရှိနိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်ပင် app ကိုတခြားသူတွေကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်အခမဲ့ခရက်ဒစ်ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးဖက်စ်အရေအတွက်ကဝယ်ယူရန်ကိုရှေးခယျြခဲ့လျှင်သင်ပထမဦးဆုံးခုနစ်ရက်ပတ်လုံးတာဝန်ခံအခမဲ့ရရှိနိုင်အမေရိကန်အခြေစိုက်နံပါတ်များနှင့်အတူသင့်ရဲ့ device ကိုစလှေတျန့်အသတ်ဘက်ကဖက်စ်များ, get ။ iFax လည်းရှိပါတယ် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ဖက်စ်များလက်ခံရရှိမှုအတွက်ထောက်ခံမှု။
စာရင်းအပေါ်အများဆုံး Feature-rich option ကိုဆက်ဆက်မရပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံစိတ်မချရနှင့်ယုန်ကလေးဖြစ်လူသိများကျနော်တို့တဦးတည်း key ကိုအကြောင်းပြချက်ကဒီမှာဖက်စ် Burner ပါဝင်သည်င့် - သင်သည်မည်သည့်ပိုက်ဆံဖြုန်းမတိုင်မီအခမဲ့ငါးစာမကျြနှာမှတက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတဦးတည်းအချိန်အရာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်တစ်ဦးချည်နှောင်ထဲမှာနေနှင့်သင့်ကို virtual ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကအတူးခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်းတစ်ဖက်စ်ပို့ချင်လျှင်အသုံးဝင်စေနိုင်ပါတယ်။
ဖက်စ် Burner သင်သည်ဖက်စ်ဖို့လိုအပ်သမျှစာရွက်စာတမ်းပုံရိပ်တွေပူးတွဲရန်သင့်ကင်မရာသို့စဓာတ်ပုံကိုစာကြည့်တိုက်ကိုအသုံးပြုပြီး, သင် app ကို wtihin တစ်ဦးအဖုံးစာရွက်ရိုက်ထည့်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်း faxing မတိုင်မီပုံစံများကိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါ app များကိုနောက်ဆုံးဖြတ်စေပေမယ့်သင့်ရဲ့ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုထံမှ faxing မှကြွလာသောအခါအသီးအသီးက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကမ်းလှမ်းအဖြစ်ဆက်ဆက်, ဖော်ပြခဲ့တဲ့ခံရဖို့ထိုက်မပေးခဲ့ပါဘူး။
JotNot ဖက်စ်: Android အတွက် | iOS အတွက်
အလွန်သေးငယ်သောဖက်စ်: Android အတွက် | iOS အတွက်
Global Positioning System (GPS စနစ်) သတ်မှတ်ထားသော
5 အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Credit ရမှတ် Apps ကပ
နောက်ဆုံးရေးသားချိန် 15 လက်မ MacBook Pros နှင့် 27 လက်မ Retina iMac
အဆိုပါ Garmin Connect ကိုသင်တန်းအမှတ်စဥ်ဖန်ဆင်းရှင် Tool ကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
အဘယ်သို့သောအကြောင်းအရာရပ် LED ပါသလား?
4 မိဘထိန်းချုပ်ရေး & စမတ်ဖုန်းများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း Apps ကပ
အမေဇုံ: Echo, Fitbit & အခြား Tech မှလူသတ်မှုမှသက်သေဖြစ်ကြ၏လိုက်တဲ့အခါ
Beginners များအတွက် 10 အကောင်းဆုံးပါ Macintosh က Web အယ်ဒီတာများ
အဘယ်မှာရှိအခြား Moms အတူ Chat ကိုသွားပါမှ
Instagram ကို Trends
အခမဲ့ Animation ရဲ့ Tools များ
NAD + T748 မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံ Receiver - ဓာတ်ပုံကိုယ်ရေးဖိုင်
အခမဲ့ကောလိပ်အွန်လိုင်း Classes ရဲ့နဲ့ဘယ်လိုသူတို့ကိုရှာပါရန်
Excel ကိုအတွက်အနီးဆုံး5သို့မဟုတ် 10 အထိ round နံပါတ်များ
ငါ, Xbox 360 အပေါ်ဒီဗီဒီ Watch နိုင်သလား?
ဆာဗာ, မက်ဘ်ကက်ရှ်ကနေအမြဲတမ်း Load သင်၏စာမျက်နှာအတင်း
နောက်ထပ်အီးမေးလ်လိပ်စာမှ iCloud မေးလ် forward ပြုလုပ်ပေးဖို့ကိုဘယ်လို
ကြိုးမဲ့ Hotspot နှင့်အတူစတင်
Gsdll32.dll တွေ့သည်သို့မဟုတ်လက်လွတ်မအမှား Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
အလွယ်တကူနှင့်လျင်မြန်စွာ Google က Chrome မှာက Web စာမျက်နှာများ Print ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
တစ်ဦး URL ကိုဆိုတာဘာလဲ (Uniform Resource Locator)
ယင်း Bliss အယ်လ်ဘမ်အနုပညာ Downloader အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
သင့်ရဲ့ပရင်တာနှင့် Scanner ကိုရှင်းလင်းနည်း
IPhone ကို Touch ကိုရောဂါ: အဘယျသို့ဒါဟာ Is နှင့်အဘယ်အရာဒါဟာအကြောင်းသလားရန်
3D ပရင်တာနှင့်အတူ Voronoi စံနမူနာ Make ရန်ကဘယ်လို
Excel ကိုဖွင့် MODE ရာထူးအမည်ဖြင့်ပျမ်းမျှ (Mode ကို) ကိုရှာပါ
ကို Canon Pixma MG5320